Ny atao raha mampirafy ny lehilahy
SALOHY Manofy ireo vady aman-janany foana
Enim-bolana katroka anio zoma 19 Jolay ny nisian’ilay vatobe nianjera teny Ampahamarinana nahafatesana olona maro.
Julio, ankizy sahirana ho hampian’i Carolus
Ankizilahikely mipetraka any Antsirabe ary kilasy faha-10 i Julio. Tao anatin’ny tambajotra Facebook, rehefa nisy nandefa ny sariny manao “tee-shirt” nasiany sora-tanana hoe “Carolicy”,
Mety ho vokatry ny toetran’ny vehivavy no mahatonga ny lehilahy hampirafy. Raha tsy ampy mantsy ny fitiavana izay omen’ny vehivavy ao an-tokantrano dia alaim-panahy hitady fitiavana any ivelany ny lehilahy.
Indraindray ihany koa dia toetra ao anatin’ny lehilahy mihitsy ny fampirafesana. Ny vahaolana voalohany tokony eritreretin’ny vehivavy dia ny fandinihan-tena. Eo ihany koa ny fitondrana am-bavaka izany olana izany.
Avy amin’ny toetran’ny vehivavy
Antony roa no mahatonga ny lehilahy hampirafy. Indraindray dia mety avy amin’ny toetran’ny vehivavy izany. Ny fitiavana anatin’ny tokontrano mantsy dia azo ampitahaina amin’ny sakafo. Ny tsy fahampian’io fitiavana io anatin’ny tokantrano dia antony iray mety handrisika ny lehilahy hitady izany any ivelany. Eo ihany koa ny fifampitondran’ny mpivady ao an-tokantrano toy ny fisian’ny ady lava sy ny fahakizitinana izay tsy mahatamana ny lehilahy ao an-tokantrano mihitsy ka mahatonga azy hampirafy. Mazana dia mahavantana ny vehivavy ny manisy lanja kokoa ny zavatra hitan’ny olona ety ivelany. Hita taratra izany ohatra amin’ny fampirimana trano satria raha jerena dia ny mandamina ny ao amin’ny trano fandraisam-bahiny no mahamaika ny vehivavy kokoa noho ny fampirimana ny fandriana. Toetra isan’ny tsy zakan’ny lehilahy anefa izay fanomezana fahafam-po ny hafa mialoha ny ao an-tokantrano izay.
Indraindray kosa anefa dia mety efa toetran’ny lehilahy mihitsy ny fampirafesana. Azo heverina ho aretina mihitsy izany. Mety hiseho ihany koa ny hoe voagejan’ny devoly ilay lehilahy ka izay no manosika azy hijangajanga. Ireo antony roa voalaza farany ireo dia samy tsy miankina amin’ny toetran’ny vehivavy.
Ny tokony ataon’ny vehivavy voalohany indrindra raha mampirafy ny vadiny dia mandinin-tena. Olona roa mifameno ny mpivady ka ny tena vahaolana dia ny fahaizana manome fitiavana ilay vady. Raha toa kosa ka tsy miankina amin’ny toetran’ny vehivavy ny fampirafesana fa vokatry ny ditran’ny lehilahy mihitsy dia ny mitondra ny olana eo anatrehan’Andriamanitra no vahaolana.
Mbola hitohy anatin’ny gazety Jejoo mivoaka rahampitso ny torohevitra.
Isaorana ny Pasteur Dyna Trimozafy nanome ny fanazavana mikasika ny lohahevitra.